Igwe na-agbawa agbawa maka igwe ọkpọkọ dị n'èzí ihicha mgbidi sitere na china
Igwe na-agbawa agbawa maka nchara nchara dị n'èzí ihicha mgbidi
1. Nkọwa mmepụta
Igwe a na-etinye aka na tube nchara na ngwaahịa ọkpọkọ iji mee ihe n'ime ime na n'èzí, wepụ ihe mkpuchi oxide welding slag, na ihe ndị ọzọ dị iche iche, na-egosi ọmarịcha ọla.
Wepụ nrụgide dị n'ime, welie ike ọgwụgwụ nke akụkụ ọrụ, iji meziwanye ihe mgbochi ike ọgwụgwụ nke mpempe ọrụ ahụ.
Mpempe ọrụ ahụ iji mee ka ntanye ihe nkiri dịkwuo elu mgbe ị na-ese ihe, na n'ikpeazụ iji melite ogo elu na nzube nke ime.
Gbara ụlọ ọrụ n'otu oge ka ha na-arụ ọrụ na mgbakwunye mgbakwunye ezubere iche, ebumnuche dị ọcha kpamkpam.
Jiri: Nke a usoro nhicha igwe na ọdabara dị iche iche diameters ígwè tube surihicha ihu, nke a na-ejikarị eme ihe
petrochemical engineering, ígwè, district kpo oku, mmiri industrial na ndị ọzọ.
- Maka ihicha mgbidi dị n'èzí nke ọkpọkọ ígwè na tubes.
- N'elu elu ugwu "BE" ikuku separator maka mfe nke chọpụtara na mmezi.
- Akụkụ mgbawa na ala bụ ihe mejupụtara manganese plating iji hụ na ogologo ndụ.
- Nhazi zuru oke na-akpaghị aka iji nye mmepụta olu dị elu na ịrụ ọrụ ọnụ.
3.Nkọwapụta nke igwe ọkpọkọ igwe agbawa agbawa:
Nlereanya Nha nhicha (mm) Ọsọ nhicha (m/min)
QGW100 50-300 2-10 Mgbidi dị n'ime nke igwe agba agba agba
QGN100 50-300 1-4 Mgbidi dị n'èzí nke igwe agba agba agba
4. Njirimara nhazi
Igwe a bụ igwe na-agba agba nchara nchara pụrụ iche, nke mejupụtara ọnụ ụlọ ịgba ọkụ, mgbakọ wheel na-agbawa agbawa, Roller conveyor, sistemu igwe eji emegharị ihe (ihe mkpuchi, elevator, Separator), sistemu mkpofu uzuzu, sistemu njikwa ọkụ, wdg.
Shot gbawara ụlọ shei ịmụta profaịlụ ígwè na ígwè efere ịgbado ọkụ Ọdịdị, bụ a siri ike, akara, mbara ọrụ ohere maka ogbugba ogbugba nke ọrụ ibe.A na-eme ụlọ mgbawa ọkụ site na shei ụlọ, ọnụ ụzọ ámá, mgbidi gburugburu, mgbidi mpụta, elu ụlọ, bọọdụ nche wdg.
Mgbawa wheel wheel
Mgbawa wheel mgbakọ bụ nke gbawara wheel shei, moto, mbubata tube, akwukwo, impeller, directional set nke ọgwụ, pointer wheel, ngọngọ ájá efere, nche osisi na ndị ọzọ components, nke epupụta, nche osisi, wdg niile eyi akụkụ iji 20 % igwe nkedo chromium dị elu.
Sistemụ imegharị ihe abrasive
Gụnye ebufe screw, igwe mbuli elu ịwụ, nkewa, nchekwa abrasive na nkeji ọkọnọ.
Usoro iwepụ uzuzu
Igwe a na-anabata Cartridge ma ọ bụ akpa ụdị uzuzu, ikuku agwụla agwụ n'oge a na-arụ ọrụ.The dedusting arụmọrụ bụ ruo 99.6%, ntụ ntụ njupụta bụ ihe na-erughị 100mg / m3, ukwuu stricter karịa mba ọkọlọtọ.
Usoro njikwa eletriki
Tọọ ogbugba bọọlụ okirikiri ọdịda mkpu ọrụ, ma ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla nke sistemu ahụ ada, ihe ndị dị n'elu na-akwụsị na-agba ọsọ, iji gbochie bọlbụ ahụ rapaara na ngwaọrụ ike ọkụ.
A. Ndị injinia anyị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dị ka ihe achọrọ nke imewe maka ndị ahịa nke akụrụngwa.ma zipụ nkwenye ndị ahịa iji nyere ndị ahịa aka ịchekwa ego.
B.N'oge mmepụta nke akụrụngwa, anyị na-ese foto ọganihu mmepụta ngwaahịa, ma zigara onye ahịa ka ọ soro ọganihu ahụ.
C. Ajị ngwongwo na-aga, anyị ga-ezipụ akwụkwọ mbụ maka onye ahịa (dị ka ndepụta nkwakọ ngwaahịa, ụgwọ, CO, Ụdị E, Ụdị A, Ụdị F, Ụdị M, B / L wdg.)
D. Anyị nwere ike inye ndị ahịa ihe osise ntọala English n'efu, eserese nrụnye, akwụkwọ ntuziaka, ntuziaka nlekọta na eserese akụkụ.
E. Anyị nwere ike izipu ndị injinia anyị ka ha na-etinye na debugging na mba ofesi, na ọzụzụ n'efu nke ndị na-arụ ọrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ.
A. Ụbọchị ole ka ịchọrọ iji mepụta igwe a?
B. Kedu ihe ụlọ ọrụ gị na-eme gbasara njikwa mma?
C. Kedu ihe bụ nkwa ịdị mma igwe gị?
D. Ị nwere ike ịnye ntinye na ntinye ọrụ na mba ofesi?Ogologo oge ole ka ọ na-ewe?
E. Kedu ka m ga-esi tụkwasị obi na ị ga-ebuga igwe ziri ezi dịka m nyere iwu?
Anyị ga-ebunye ezigbo igwe dị mma dịka anyị tụlere ma kwenye n'usoro.Usoro mmepụta na mbupu anyị ga-ese foto ma zigara gị.
Ozi ụlọ ọrụ 7.
Anyị guzobere na 2012, na-ekpuchi ebe fọrọ nke nta 17000square.
Anyị na-elekwasị anya na usoro dị iche iche gbara agba agba igwe, ájá nkedo akụrụngwa, owuwu ígwè, foundry ígwè na ndị ọzọ ulo oru nnyocha na mmepe.
The ụlọ ọrụ agafeela ISO9001, CE na BV asambodo.
Anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa na China, USA, EUROPEA, ụfọdụ mba Asain, India, South Africa, Tanzania, Nepal, na ndị ọrụ tọrọ ntọala.
Anyị ji ezi obi na-atụ anya ka gị na ụlọ ọrụ gị na-arụkọ ọrụ.
Nke gara aga: Q37 usoro ígwè ulo oru nko ụdị ogbugba agbawara igwe price
Osote: Site ụdị ígwè shotblasting igwe / ígwè efere ogbugba ogbugba igwe mere na China
Kehore eriri eriri na-aga n'ihu waya ntupu eriri eriri conve...
Igwe na-agba ọkụ roba Belt, Hook Polisher Abrator, abrator, Igwe na-agbapụta eriri roba ụdị agba, Nko abụọ Abrator, Site na igwe na-agbawa nri ọkụ, Ngwaahịa niile